Ban Ki-moon oo dhalleeceeyay weerarradii kaniisadaha Gaarisa - Sabahionline.com
Ban Ki-moon oo dhalleeceeyay weerarradii kaniisadaha Gaarisa
Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa dhalleeceeyay weerarradii Axaddii lagu qaaday laba kaniisadood uu ku yaal Gaarisa sida lagu sheegay hadal uu Isniintii (2-dii Juulaay) jeediyay af-hayeenkiisa.
"Weerarrada, sida ula-kaca ah loola bar-tilmaameedsado goobaha lagu cibaadaysto, waa axmaqnimo waana jariimo," ayaa lagu sheegay war-murtiyeedka. "Ma jirto wax sabab ah oo banneeynaysa in si aan loo aaba-yeelin loo bar-tilmaameedsado dadka rayidka ah. Kuwii soo abaabulay weerarradaa, iyo weerarradii kale ee argagixiso ee dhawaan ka dhacay Kenya, waa in caddaaladda la horkeenaa."
Ban ayaa tacsi u diray dadkii dhibaatadu ka soo gaartay weerarrada iyo qoysaskoodii. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay daraasiin kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarradaa.